Sirdoonka Artificial (AI) Iyo Kacaanka Suuqgeynta Dijital ah | Martech Zone
Suuqgeynta dhijitaalka ah waa udub dhexaadka kasta ganacsiga ecommerce. Waxaa loo adeegsadaa keenista iibka, kor u qaadista wacyiga astaanta, iyo gaarsiinta macaamiisha cusub.
Si kastaba ha ahaatee, suuqa maanta waa mid buuxa, oo ganacsiyada e -commerce waa inay si adag u shaqeeyaan si ay u garaacaan tartanka. Kaliya maahan - waa inay sidoo kale la socdaan isbeddellada teknolojiyaddii ugu dambeysay oo ay si habboon u hirgeliyaan farsamooyinka suuqgeynta.
Mid ka mid ah hal -abuurnimada teknolojiyad ee ugu dambeysay oo wax ka beddeli karta suuqgeynta dhijitaalka ah waa sirdoonka macmal (AI). Aan aragno sida.
Arrimo Muhiim Ah Kanaalka Suuqgeynta Maanta
Waqtigan xaadirka ah, suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa u muuqata mid toos ah. Ganacsiyada Ecommerce waxay shaqaaleysiin karaan suuqgeeye ama abuuri karaan koox maamuli doonta shabakadaha bulshada, maareyn doona xayeysiisyada lacag bixinta ah, shaqaaleysiiya kuwa wax saameeya, oo la macaamila xayeysiisyada kale. Wali, dhowr arrimood oo muhiim ah ayaa soo ifbaxaya oo dukaamada ecommerce ay dhibaato ku qabaan.
Meheraddu waxay seegtaa U-dhawaanshaha Macaamiisha-Qarniga -Ahaanshaha macmiilku waa inuu ahaadaa hadafka ganacsi kasta. Weli, milkiileyaal ganacsi oo badan ayaa gudbiya fikradan waxayna ku sii jeedaan naftooda, ROI -kooda, iyo alaabtooda. Sidaas darteed, shaqsiyeynta macmiilka ayaa ah mid aan caddayn, shirkaduhuna inta badan waxay go'aansadaan inay wax ka qabtaan hadhow. Nasiib darro, tani waa qalad weyn. Dunida maanta, macaamiishu way ogyihiin inta ay mudan yihiin mana jecla in loola dhaqmo sidii bangiyada doofaarka. Iyadoo aan lahayn hab macmiil ku salaysan, meheraduhu waxay seegi doonaan inay abuuraan saldhig macmiil oo daacad ah oo ay ku tartamaan kuwa ka soo horjeeda.
Waxaa jira Dhibaatooyin Xogta Weyn - Milkiilayaasha bakhaarka Ecommerce waxay yaqaaniin sida daruuriga ah ururinta xogta ku saabsan macaamiisha marka loo eego ololaha suuqgeynta ee guuleysta. Uruurinta xogta macmiilka ayaa sidoo kale hagaajinaysa waayo -aragnimada macmiilka waana inay, markaa, kordhisaa dakhliga. Nasiib darro, ganacsiyadu waxay inta badan la kulmaan caqabadaha falanqaynta xogta weyn. Tani waxay ka dhigaysaa inay seegaan macluumaad muhiim ah oo sii caawin kara inay maareeyaan suuqgeynta habdhaqanka.
Erayada lataliyaha Mareykanka iyo qoraaga Geoffrey Moore:
Iyadoo aan la hayn xog weyn, shirkaduhu waa indhoole iyo dhegoole, waxay ku dhex wareegayaan shabakadda sida deerada oo ku taal waddo weyn.
Geoffrey Moore, Suuq -geynta iyo Iibinta Alaabooyinka Carqaladeeya Macaamiisha Weyn
Arrimaha Abuurista Maadadu Waa Dhab - Xaqiiqdu waxay tahay inaysan jirin suuq -geyn dijital ah oo aan ka koobnayn. Mawduucu wuxuu muhiim u yahay hagaajinta wacyiga astaanta, kor u qaadista darajooyinka, iyo abuurista xiisaha. Waxyaabaha ugu badan ee loo adeegsado suuqgeynta dhijitaalka ah waxaa ka mid ah dhejimaha baloogga, maqaallada, cusboonaysiinta bulshada, tweets, fiidyowyo, bandhigyo, iyo buugaag. Weli, mararka qaarkood ganacsiyadu ma yaqaaniin waxyaabaha keeni kara faa'iidooyinka ugu badan. Waxay la halgamayaan falanqaynta falcelinta dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee waxa ay wadaagaan waxaana laga yaabaa inay isku dayaan inay hal mar ku wada daboolaan halkii ay ku sii jeedaan waxa ugu fiican.
Xayeysiisyada La Bixiyay Mar Walba Ma Toosna - Qaar ka mid ah milkiilayaasha bakhaarka ecommerce ayaa inta badan rumaysan in maadaama ay hore u haysteen bakhaar, ay dadku iman doonaan, laakiin badiyaa xayeysiisyo lacag -bixin ah. Sidaa darteed, waxay u malaynayaan in xayeysiisyada lacag -bixintu ay yihiin hab nabdoon oo si dhakhso leh loogu soo jiidan karo macaamiisha. Si kastaba ha ahaatee, suuqgeeyayaashu waa inay had iyo jeer ka fikiraan habab cusub oo ay ku hagaajin karaan xayeysiiska haddii ay rabaan inay tan si guul leh u sameeyaan. Dhinac kale oo la tixgeliyo waa bogga soo dega. Si aad u hesho natiijooyinka suuq -geynta ugu fiican, bogagga soo degaya waa in si habboon loo qaabeeyaa oo ay ka shaqeeyaan dhammaan aaladaha. Weli, meherado badan ayaa go'aansada inay u isticmaalaan boggooda hoyga sidii degitaan, laakiin taasi had iyo jeer maahan xalka ugu fiican.
Hagaajinta Emailka oo liita - Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee kor loogu qaado badeecadaha waxaa ka mid ah suuqgeynta emaylka. Iyada oo leh, meheradaha ecommerce waxay si toos ah ugu dhowaan karaan macaamilka waxayna yeelan karaan heerar beddelid sare. Iimaylada ayaa sidoo kale hagaajinaya cilaaqaadyada hogaamiyaasha waxaana loo adeegsan karaa macaamiisha mustaqbalka, kuwa hadda jooga, iyo kuwii hore.
Nasiib darro, celceliska heerka furitaanka iimaylada ayaa mararka qaarkood aad u hooseeya. Aad ayay u badan tahay in celceliska heerka furitaanka tafaariiqdu uu yahay qiyaastii 13%. Isla sidaas oo kale ayaa loogu talagalay qiimayaasha guji. Celceliska emaylka CTR dhammaan warshadaha oo dhan waa 2.65%, kaas oo si weyn u saameeya iibka.
StartupBonsai, Tirakoobka Suuqgeynta Iimaylka
Dhaqanka ugu Fiican ee leh Xalka AI - Nasiib wanaag, tikniyoolajiyadda maanta waxaa loo adeegsan karaa suuqgeynta dhijitaalka ah si loo xaliyo dhammaan arrimaha kor lagu sheegay. AI iyo barashada mashiinka waxaa loo adeegsan karaa dhowr siyaabood si loo wanaajiyo shaqsiyeynta, wanaajinta, iyo abuurista maadada. Waa tan sida.
AI ee Shaqsiyeynta Wanaagsan - Ganacsiyadaas e -commerce ee la socda isbeddellada ugu dambeeyay waxay og yihiin in AI loo adeegsan karo hagaajinta shaqsiyeynta isla marka uu macmiilku ku soo dego bogga. Dhammaan isticmaaleyaashu isku mid ma aha, oo leh AI, summaddu waxay samayn karaan kuwa soo socda:
Muuji waxyaalo la gaaryeeliyay aaladaha oo dhan
U soo bandhig badeeco ama adeeg ku salaysan goobta
Bixi talooyin ku salaysan raadinta hore iyo ereyada muhiimka ah
Beddel nuxurka mareegaha oo ku salaysan booqdaha
U adeegso AI falanqaynta dareenka
Tusaalaha ugu wanaagsan ee shaqsiyeynta e -commerce waa Shakhsi Ahaan Amazon, kaas oo u oggolaanaya horumariyayaashu inay abuuraan barnaamijyo iyagoo adeegsanaya farsamada barashada mashiinka sida Amazon oo kale.
Qalabka Awoodda leh ee Falanqaynta Xog Weyn -Si loo abuuro istiraatiijiyad ku saleysan macmiilka, ganacsiyadu waa inay ka shaqeeyaan ururinta, falanqaynta, iyo shaandhaynta macluumaadka macmiilka ee ansaxa ah. Iyada oo leh AI, ururinta xogta iyo falanqaynta ayaa noqon karta mid toos ah. Tusaale ahaan, aaladda saxda ah ee AI ayaa go'aamin karta nooca badeecadaha inta badan la iibsado, bogagga aad loo arko kuwa ugu badan, iyo kuwa la midka ah. AI waxay la socon kartaa safarka macaamiisha oo dhan waxayna bixin kartaa xalka saxda ah si loo hagaajiyo iibinta. Tusaale ahaan, iyadoo la adeegsanayo Google Analytics, suuqyadu waxay ku arki karaan dabeecadda macaamiisha websaydh.
Aaladaha AI ee Online -ka ah ee Abuuritaanka Macluumaadka - AI waxay ku xallin kartaa labada arrimood ee ugu badan oo leh nuxur - dardargelinta abuurista maadada iyo falanqaynta falcelinta macmiilka ee nuxurka. Marka ay timaaddo abuurista maadada, waxaa jira aalado badan oo AI ah oo laga heli karo khadka tooska ah si ay uga caawiyaan suuq -geeyayaashu inay la yimaadaan sawirro summad u leh qoraallada bulshada, cinwaannada maqaallada, ama xitaa qoraan boostada baloogga ama abuuraan fiidyow dhiirrigelin ah. Dhanka kale, softiweerka ku shaqeeya AI wuxuu ka caawin karaa suuqleyda inay falanqeeyaan wax ka badan tirada dadka. Waxay la socon kartaa dabeecadda macaamilka iyo ka -qaybgalka warbaahinta bulshada. Qaar tusaalooyinka waxaa ka mid ah Sprout Social, Cortex, Linkfluence Radarly, iyo wixii la mid ah.
AI Waxay Fududayn kartaa Xayaysiisyada onlaynka ah Waqtigan xaadirka ah, Facebook iyo aalado kale oo badan ayaa bixiya aaladaha AI si ay uga caawiyaan suuqgeeyayaasha inay si fudud u maareeyaan xayeysiiskooda. Taas micnaheedu waa in xayeysiisyadu khasaari maayaan. Dhinaca kale, suuqgeeyayaashu waxay marin u helaan dhammaan noocyada macluumaadka ee fududeynta kobcinta xayeysiiska fudud. Dhanka kale, Facebook wuxuu adeegsadaa AI si loogu dhiibo xayeysiisyadaas si toos ah dhagaystayaasha la beegsanayo. Intaa waxaa dheer, bogga soo degitaanka ayaa kaalin muhiim ah ka sokow xayeysiisyada. Naqshadaynta bogga ugu fiican ee suurtogalka ah ayaa samayn kara farqi weyn. AI waxay ku caawin kartaa laba qaybood oo muhiim ah oo ah bogga soo degitaanka cajiibka ah-shaqsiyeynta iyo naqshadeynta.
AI si kor loogu qaado Email - Maadaama suuqgeynta iimaylku ay muhiim u tahay meheradaha internetka, AI waxay hagaajin kartaa sida emaylka loo abuuro. Maxaa ka sii badan, AI waxaa loo isticmaali karaa in lagu diro emaylo tayo leh iyo kordhinta dakhliga inta uu yahay mid kharash badan. Waqtigan xaadirka ah, aaladaha ku shaqeeya AI waxay awoodaan:
Qor khadadka mawduuca emaylka
U dir iimaylo shaqsiyeed
Hagaaji ololayaasha emailka
tayadoodii emayl u dir jeer
Abaabul liisaska emaylka
Wargeysyada otomaatiga ah
Hagaajintaani waxay kordhin kartaa sicirka furitaanka iyo gujinta oo waxay horseedi kartaa iibin badan. Intaa waxaa sii dheer, sheekooyinka AI waxaa loo adeegsan karaa barnaamijyada farriinta, waxay dhammaystiraan ololayaasha emaylka, waxayna gaarsiiyaan khibradda shaqsiyeed ee ugu dambaysa.
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa qayb muhiim ah ka ah guusha ganacsi kasta. Wali, dukaamada e -commerce waxay leeyihiin tartan aad iyo aad u badan si ay u garaacaan, dariiqaasna, suuqyadu waxay la kulmi karaan caqabado dhowr ah. Tusaale ahaan, abuurista nuxurku waxay noqon kartaa mid daallan, wax ka qabashada xogta weynna waxay u ekaan kartaa wax aan macquul ahayn.
Nasiib wanaag, maanta, aalado badan oo ku shaqeeya AI ayaa halkaas ka caawiya suuqgeeyayaasha inay sare u qaadaan ololahooda iyo ganacsiyadu dakhli soo saaraan. Laga soo bilaabo emayllada la hagaajiyay illaa xayeysiisyada fudud ee internetka, AI waxay awood u leedahay inay beddesho sida suuqgeynta dhijitaalka ah loo sameeyo. Waxa ugu fiican ee ku saabsan - waa dhowr guji oo kaliya.
Daah-: Martech Zone wuxuu leeyahay xiriiriyaha Amazon ee maqaalkan.
Tags: aiwaa chatbotstusaale ahaanaaladahaxalqalabamazon shakhsiyeeyosirdoonka macmalxog weynfalanqaynta xogta weynwacyigelinta noocawada sheekeysigaqiimaha-guji-marayoabuur abuurkamacaamiil-centricmarketing digitalemaylka ctriimaylka tirakoobka suuq geyntahagaajinta emaylkaFacebook waaGeoffrey Moorehal-abuurnimodallacsiinta internetkaqiimaha furanxayeysiiska la bixiyayshakhsi ahaaneedppcqiimeynta seobilow
Sida Loola Socdo Soo Gudbinta Foomka Elementor ee Dhacdooyinka Falanqaynta Google iyadoo la adeegsanayo JQuery